Faritra fampiharana ny taratasy fanamarinana mahafeno - E-afovoany
Faritra fampiharana ny taratasy fanamarinana mahafeno
B2A - fifandraisana amin'ny fitantanana sy birao
Tendrana sy làlana elektronika
Fitsarana sy fonja
Biraon'ny fanofanana mpamily
B2B - fifandraisana eo amin'ny fandraharahana
B2C - fifandraisana mifandray amin'ny mpanjifa
Ho an'ny fivarotam-panafody
Nanomboka ny 18 aprily 2018, ny fandraisana anjara amin'ny fahazoana antoka ho an'ny daholobe dia mitaky ny fampiasana taratasy fanamarinana mahafeno. Hanao sonia ny rakitra EAT, izay ilainao fotsiny dia seta manana taratasy fanamarinana mahafeno.
Fampidirana rakitra EAT miaraka amin'ny (araka ny takiana):
Fepetra MINI napetraka
Drafitra fanamarinana STANDARD
Fepetra SIMPLYSIGN napetraka
Taratasy tsy mendrika - Taratasy fanamarinana
na mampiasa rindrambaiko e.g. 7-Zip, Winrar, Ms Word, Acrobat sns.
Rakitra fanaraha-maso Eoropeana tokana
Fandefasana ny tatitra ara-bola ao amin'ny Rejistra National National
Raha te handefa ny tatitra ianao dia ampy kitapo fanamarinana mahafeno
Ny fanamarinana mahafeno ny fametrahana ny taratasy fifandanjana eo ambanin'ny fomba S24
Eto ianao afaka manolotra antontan-taratasy any amin'ny tahirin-kevitra ara-bola ara-bola maimaim-poana
Ny fanamarinana mahafeno ny fametrahana ny taratasy fifandanjana eo ambanin'ny Z30
Hatramin'ny Oktobra 2018, ny orinasa rehetra dia voatery hamorona fanambarana ara-bola amin'ny alàlan'ny endrika elektronika amin'ny alàlan'ny taratasy fanamarinana mahafeno (mandra-pahatongan'izao fotoana izao dia hisy ny fanovana antontan-taratasy vita sonia sy ny taratasy fanamarinana).
Ny tatitra iray momba ny Rejistra Fitsarana nasionaly dia azon'ny olona iray voasoratra ao amin'ny lisim-pitsarana nasionaly ary manana ny laharan'ny PESEL azy. Mila mari-pankasitrahana ilaina ity olona ity miaraka amin'ny laharana Pesel
Ho an'ny fanontaniana rehetra dia misy 58 3331000 na biuro@e-centrum.eu
Fandefasana maimaimpoana antontan-taratasy ara-bola
Ity dia fampahalalana momba ny fividianana sy ny varotra mandritra ny fe-potoana voafetra.Mandefasana fotsiny amin'ny endrika elektronika.Ny fampitana isam-bolana amin'ny endrika elektronika ho an'ny fividianana sy fivarotana (JPK_VAT) dia atao amin'ny alàlan'ny fifandraisana elektronika, ka raisina ho ilaina hiantoka ny fiarovana, ny fahatokisana ary ny fandavana ny angona an-tsoratra ao amin'ireo boky.
Fanaraha-maso ny fanamiana
Amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny Certum Partner Point: • handamina ny daty fitsidihanao Hotline +48 58 333 1000 na +48 58 500 8000 maka - hotline +48 58 333 1000).
Raha te hampiasa ny fanampian'ny Certum Partner Point ianao amin'ny fanamarinana ireo antontan-taratasy sy hamita azy ireo alohan'ny fitsidihanao dia mba omeo miaraka aminao koa ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ny alàlan'ny lisitra voaray (amin'ny e-mail)
Soavaly: Ny fanamarinana sonia ao amin'ny Certum Partner Point dia serivisy karama. Ny fampahalalana momba ny vidin'ny serivisy hafa (fampahavitrihana sy fametrahana ny taratasy fanamarinana) dia azo raisina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny mpandraharaha mivantana ao amin'ny Certum Infolinia Partner Point +48 58 333 1000
Fomba fanaterana tahirin-kevitra taorian'ny fanamarinana: Ny andiany iray vita sonia voamarina misy porofon'ny maha-izy azy dia tokony avela any amin'ny Certum Partner Point, raha toa kosa ny andiany hafa.
Ahoana no fomba hamelomana ny taratasy fanamarinana mahafeno ny JPK?
Fametahana sonia elektronika ho an'ny JPK
Inona ny atao hoe JPK?
Ity fomba fananganana profil vaovao ao amin'ny tranonkala ity dia natao ho an'ny olona manana sonia elektronika azo antoka. Miantoka ny fidirana tsy misy hatak'andro amin'ny fidirana manontolo ny vavahadin-tserasera, tsy mila mitsidika an'i TJO. Alohan'ny fisoratana anarana dia mila manomana kitapo fanaovana sonia elektronika ianao
Raha hisoratra anarana, azafady mividy:
Fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny sonia elektronika mahafeno
Ny mpampiasa dia afaka mamorona mombamomba azo itokisana amin'ny alàlan'ny fanamarinana.
Kitapo fanaovana sonia elektronika
Ireo mpandoa vola amin'ny fiarovana ara-tsosialy izay mandefa antontan-taratasy elektronika dia tsy maintsy manome sonia elektronika azo antoka.
Ny taratasy fanamarinana dia omena ho an'ny olona iray izay tompon'andraikitra amin'ny famoahana ny antontan-taratasy any amin'ny ZUS.
Ny PUE koa dia manome ny antsoina hoe mombamomba ny matihanina: dokotera sy bailiff.
Fampahalalana ho an'ny mpandoa fandraisana anjara - kitiho ny rohy
EPPatcher dia fampiharana amin'ny fikarakarana antontan-taratasy fiantohana. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny Electronic Services Platform (PUE). Ny EPłatnik dia mitovy amin'ny programa Płatnik
Ao amin'ny fampiharana ePłatnik: hamorona antontan-taratasy fiantohana amin'ny alàlan'ny mpanao hatsatra ianao ary hamakafaka, hamerina handinika sy hanao pirinty ny taratasy fiantohana amin'ny ZUS ianao, hanafatra ireo rakitra avy amin'ny rafi-pitondrana HR ivelany sy fandoavam-bola, jereo ny isan'ireo kaonty fandraisana anjara izay nomenay anao, miomana fampahafantarana isam-bolana sy isan-taona ho an'ny olona iray. miantoka, azonao atao ny manitsy tsara ny fomba fiasan'ny fampiharana, misafidiana ny fomba fandefasana antontan-taratasy (amin'ny taratasy na elektronika) ary sonia azy ireo.
Ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola dia mandrisika ny hametraka kaonty amin'ny endrika elektronika amin'ny endrika elektronika.
Izy ireo dia mamela ny fandefasana fanambarana amin'ny alàlan'ny fifandraisana elektronika
Ny antontan-taratasy elektronika rehetra napetraka ao amin'ny rafi-e-Doka dia tsy maintsy omena sonia elektronika: sonia elektronika manana alàlana na «data déditation» (sonia elektronika miantoka ny maha-fambara ny fanambarana sy ny fangatahana miorina amin'ny angon-dàlana maha-mpanoratra). azo koa miaraka (nosoniavina miaraka ny PIT-11Z na PIT-8CZ).
Mba hahafahana mandaitra kokoa ny e-Fanambarana - Ny olona iray manome alalana handefa ny e-fanambarana dia tokony hividy kitapom-peo elektronika:
loharanom-baovao: rohy - https://www.finanse.mf.gov.pl
Ny fanamarinana mahafeno ny fepetra dia mandefa fanambarana mivantana avy amin'ny vavahadin-tserasera e-nambara
Ny fanomezan-dàlana ny antontan-taratasy ara-pitsaboana notazonin'ny tobim-pahasalamana - mifanaraka amin'ny fepetra takiana, nanomboka ny 1 aogositra 2014, dia tokony tazonina amin'ny endrika elektronika ny antontan-taratasy, ary ny iray amin'ireo fomba fanamarinana azy dia ny fampiasana sonia elektronika
Fahazoana angon-drakitra voangona ao amin'ny Rafitra fampahalalana momba ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny sonia elektronika.
Ny fangatahana fitsaboana dia mangataka amin'ny alàlan'ny sonia elektronika.
Makà krizy fiantohana ara-pahasalamana eropeana (EHIC). Manomana fialan-tsasatra, asa na fianarana any ivelany ve ianao? Matahotra ve ianao raha hanaiky ny fahasalamanao ny dokotera raha marary?
Inona no tokony hatao Momba ny fampiharana EHIC. Midira ao raha te hanangona ilay EHIC efa vita ianao ao amin'ny sampana NFZ na mahazo izany amin'ny alàlan'ny paositra. Aza adino ny hanao sonia ny fampiharana. Raha ho anao izany, ilay olona ekenao - dia mila sonia ianao. Azonao atao ny mahita santionany fampiharana ao amin'ny fizarana inona hanomanana. Ampiharo ny fampiharana nosoniavina ary tehirizo ho PDF. Ampidiro ny antontan-taratasy ilaina. Raha mila fanazavana, dia jereo ny tokony hiomanana. Alefaso amin'ny mailaka ny adiresin'ny sampana NFZ any amin'ny fonenanao. Zahao ny adiresin'ny sampana NFZ. Andraso ny karatra efa vonona na hitaterana any amin'ny sampana NFZ.
Ny tombony azo amin'ny taratasy elektronika:
- fanatsarana ireo fomba mifandraika amin'ny fizahan-tahirin-kevitra
- Fanatsarana ny kalitao sy ny fisian'ny serivisy fitsaboana
- Fanaovana tahiry sy fampidirana rafitra momba ny fahasalamana ao an-toerana sy nasionaly
- mitombo ny fiarovana sy ny fitahirizana antontan-taratasy elektronika
Nanomboka ny 1 Janoary 2016 dia afaka namoaka ny fandroahana tamin'ny endrika elektronika ireo dokotera. Ny fototry ny ara-dalàna dia ny fanitsiana ny lalàna amin'ny tombontsoa ara-bola amin'ny fiantohana ara-tsosialy raha toa ny aretina sy ny fiterahana ary ny fihetsika hafa (Gazetin'ny lalàna 2015, laharana 1066).
Nanomboka ny 1 Janoary 2016, ny dokotera dia afaka namoaka fialan-tsasatra marary elektronika, antsoina hoe e-ZLA. Fampitandremana eo amin'ny endrika taratasy (ZUS ZLA) dia azo averina hatramin'ny faran'ny volana Novambra 2018. Na izany aza, manomboka ny 1 desambra 2018, ny mpitsabo dia hivoaka ireo fandroahana elektronika ihany.
Ny famoahana e-exemption, ny tokony hataonao fotsiny dia mandidy ny mari-pahaizana mahafeno: rohy eto ambany
Indray mandeha indray mandeha ny taratasy fanamarinana dia entinay miaraka amin'ny karatra kriptografika izay napetraka ao anaty mpamaky mifandray amin'ny solosaina. Hanao sonia ny e-ZLA sy ireo antontan-taratasy hafa, ny mpamaky miaraka amin'ny karatra ary ny taratasy fanamarinana nampidirina dia tokony hapetraka ao anaty solosaina (USB input).
Ity fanamarinana ity dia azo ampiasaina hanasonia ny antontan-taratasy amin'ny fitaovana rehetra ampiasaina. Rehefa manao sonia antontan-taratasy miaraka amin'ity fanamarinana ity ianao dia tsy maintsy miditra amin'ny PIN (misy ny litera 6-8). Ny dokotera dia mametraka ny tenany ny PIN rehefa mandefa ny taratasy fanamarinana amin'ny solosaina.
Ny Taratasy mendrika dia manan-kery mandritra ny 2 taona na XNUMX taona - alohan'ny vanim-potoana itondrana, dia afaka mangataka fanavaozana ny taratasy fanamarinana ianao amin'ny fahazoana kaody mavitrika ho fanavaozana.
Fialana amin'ny eletronika marary (e-ZLA)
Fananganana fiantohana ara-tsosialy - azo antoka amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fiantohana ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fampiasana sonia elektronika, izay ilaina ny fandefasana antontan-taratasy amin'ny endrika elektronika ho ampahany amin'ny fangatahana Payer.
Birao Customs - fandefasana fanambarana sy antontan-taratasy any amin'ny biraon'ny Customs amin'ny alàlan'ny fangatahana e-Zefir, ohatra, ny famerenan'ny hetra excise dia mitaky sonia elektronika.
Biraon'ny hetra - sonia elektronika azo ampiasaina handefasana hetra ara-elektronika amin'ny alàlan'ny fangatahana e-Fanambarana na manome antontan-taratasy / data mampiasa ny Uniform Control File (JPK).
Masoivoho poloney ho an'ny fampandrosoana Enterprise - amin'ny maha fampiharana ny fanampiana ara-bola any Etazonia, ny PARP dia mamela ny fandefasana fangatahana mifandraika amin'ny alàlan'ny elektronika raha omena sonia elektronika izy ireo.
General inspector Générale momba ny ara-bola - ny fandefasana tatitra momba ny fifanakalozana efa vita mihoatra ny EUR 15 amin'ny alàlan'ny sehatra internet manokana dia mitaky ny fampiasana sonia elektronika.
e-PUAP - fidirana haingana ny rafitra e-PUAP noho ny fampiasana sonia elektronika hanamafisana ny angon-drakitra momba ny mpampiasa
Fitsarana iraisana - mandefa fitarainana eo ambanin'ny fomba fiasa elektronika (antsoina hoe e-fitsarana)
Fifandraisana amin'ny fitantanana sy birao
Famaranana lavitra ny fifanarahana momba ny lalàna sivily. Ny sonia elektronika dia mitovy amin'ny sonia tanana iray, izay no mahatonga azy hanao sonia ireo karazana fifanarahana misy eo amin'ny orinasa.
Fandraisana anjara amin'ny lavanty azo antoka sy tenda elektronika nalamina tamin'ny alàlan'ny sehatra internet mety. Raha ny fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe dia misy adidy ny mametraka fanambarana miaraka amin'ny sonia elektronika azo antoka.
Ny fanoratana ny antontan-taratasy any amin'ny JEDZ (Tahiry Fangatahana Eropeana momba ny fanamboarana) mifandraika amin'ny fanovana lehibe mifandraika amin'ny fomba fandefasana ny antontan-taratasy JEDZ amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana elektronika fifandraisana, izay mandeha avy amin'ny 18 aprily 2018.
Mametraha taratasy fanamarinana
E-invoice - mandefa mailaka elektronika amin'ny Internet. Ny lalàna ampiharina dia mitaky ny ampy antoka tsara ny maha azo atokisana ny e-invoice, izay omena amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny antontan-taratasy miaraka amin'ny sonia elektronika.
Taratasy elektronika azo itokisana miaraka amin'ireo mpanjifana noho ny fanaovana sonia ny antontan-taratasy sy ny taratasim-pifandraisana elektronika.
Ny vahaolana narosonay dia misy ny mety ho fampiasa rehetra amin'ny sonia elektronika (tsy misy fandoavana fanampiny):
Ny fanoratana ny antontan-taratasy rehetra misy fiantraikany ara-dalàna amin'ny tsy fandavana
120.000 XNUMX hajia mitazona fotoana (mitovy amin'ny daty voafandriketsaka)
Ny mety hasiana sonia anatiny ao anaty tahirin-kevitra PDF miaraka amin'ny sary famantarana
Ny fanamarinana avy hatrany ny fanomezan-dàlana sonia amin'ny antontan-taratasy PDF (tsy mila mametraka rindrambaiko fanampiny)
Fantatra avy hatrany ny sonia Certum toy ny itokisana amin'ny rindrambaiko Adobe Acrobat
Fifandraisana mifandray amin'ny mpanjifa
Tsy hahomby ny fandefasana ny Rafitra Famandrihana Vokon-tsarimihetsika Integrated (ZSMOPL), nomanina ny 1 Janoary 2017. Niaiky ny minisiteran'ny fahasalamana fa noho ny olana marobe mipoitra mandritra ny rafitra dia ny fetra ny tatitra amin'ny rafitry ny rafitra ZSMOPL dia manomboka amin'ny 30 jona 2018 fotsiny.
"Ny departemantan'ny fivarotam-panafody, ny fivarotam-panafody na ny departemantan'ny fivarotam-panafody dia takiana amin'ny fampahalalana amin'ny Rafitra Misahana ny fanaraha-maso ny varotra amin'ny vokatra fanafody, fampahalalana momba ny fitaterana, famoronana ary famindrana any amin'ny fivarotam-panafody, toeram-pitsaboana na departemantan'ny hopitaly:
Te hiaraka amin'ny tompon'ny Qualified Electronic Signature ve ianao, misy manana fanontaniana? Mandefasa hafatra amin'ny: biuro@e-centrum.eu ampidiro ny anaranao, miantso anarana sy nomeraon-telefaona anao. Antsoy +58 333 1000 XNUMX Ho hitan'ny mpanoro hevitra anao.
ZSMOPL SYSTEM OPERATION
Fanolorana natokana ho an'ny fivarotam-panafody
Avy amin'ny adidy miainga amin'ny lalàna 17 febroary 2005 momba ny informatika ny asa ataon'ireo sampandraharaha manatanteraka asa ampahibemaso (Journal of Laws No. 64, item 565, raha nasiam-panovana) dia misy rafitra IT antsoina hoe "Electronic izay natsangana tao amin'ny biraon'ny inspektera jeneraly momba ny fiarovana ny data manokana. sehatry ny serasera miaraka amin'ny Inspecteur General ho an'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana "(e-GIODO)
Mba hahazoana fika iray hamoronana sonia elektronika mahay dia tsy maintsy mividy ianao:
Sehatry ny serasera elektronika miaraka amin'ny GIODO
Taratasy mendrika, izay azonay ampiasaina hametrahana sonia elektronika amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny sehatra e-GIODO
Ny inspektera générale momba ny fitantanam-bola ara-bola (GIFI) dia nametraka rafi-pitantanana IT izay manome alalana ny andrim-panjakana IT handefa angon-drakitra amin'ny GIFI (www.mf.gov.pl). Ny angon-drakitra mifindra dia tsy maintsy nosoniavina sonia elektronika mahafeno.
Ny adidy ny mandefa ny fampahalalana an-tserasera amin'ny GIFI, izay antsoina hoe andrim-panjakana tsy maintsy ananana, ireto dia:
banky, trano fivarotam-bola, orinasa miasa eo amin'ny sehatry ny lalao mety, fifaninanana miaraka sy lalao milina, orinasa fiantohana, sampana lehibe amin'ny orinasa fiantohana vahiny, mpivarotra mpivarotra, famatsiam-bola, orinasa famatsiambola, famatsiambola fiaraha-miasa ary sendikà mpampindram-bola, orinasa manofa sy orinasa. fifanakalozana vola, notantanan-trano, trano mivarotra, fivarotana antikom-pako, trano-paosy, trano fivarotana faharoa, fananganana.
Sehatra fifandraisana serasera miaraka amin'ny DIODO
Taratasy mendrika, izay azonay ampiasaina handefasana tatitra ho an'ny GIFI
Mifanaraka amin'ny zavakanto. Ny 5 amin'ny lisitry ny sonia elektronika, ny angona amin'ny endrika elektronika izay manana sonia elektronika azo antoka voamarina amin'ny alàlan'ny taratasy fanamarinana mahay dia mitovy amin'ny fepetra ara-dalàna amin'ny antontan-taratasy mitondra sonia tanana.
Ny lalàna tamin'ny 29 Janoary 2004, ny lalàna momba ny Fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe (Gazetin'ny lalàna laharana faha-19, laharana faha-177) dia nampiditra ny mety hisian'ny tendron-tsolika amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika. Mifanaraka amin'ny zavakanto. Ny 78 amin'ity lalàna ity, ny tolotra natolotra mandritra ny fironana sy ny fividianana elektronika dia tokony homena, ao anaty fanaintainana tsy misy dikany, miaraka amin'ny sonia elektronika azo antoka izay nohamarinina tamin'ny alalàn'ny fanamarinana mendrika.
Ireo olona, ​​orinasa mipoitra mandritra ny lavanty an-tserasera na malemilemy dia tokony hanamboatra ny tenany amin'ny fangatahana sonia elektronika azo antoka
Taratasy fahazoan-dàlana, izay azonay ampiasaina amin'ny lelavola elektronika na lavanty
Fifandraisana mifandraika amin'ny fitsarana sy ny serivisy fanagadrana amin'ny alàlan'ny fampiasana elektronika amin'ny alàlan'ny sonia elektronika.
Fanomanana ny minitra elektronika mandritra ny fitsaràn'ny fitsarana amin'ny alàlan'ny sonia elektronika.
Ny fandefasana fangatahana amin'ny alàlan'ny fanaovan-tsonia ao anaty e-Court dia azo atao amin'ny alàlan'ny elektronika noho ny fampiasana sonia elektronika.
Taratasy fanamarinana ara-elektronika
Fanatanterahana ny taratasim-pifandraisana elektronika eo ambany adidy handefasana mpilatsaka ho an'ny mpamily (PKK) amin'ny Profile Starosty. Ny fampahalalana mora indrindra sy haingana dia azo alefa amin'ny alàlan'ny sonia elektronika.
Manolotra atolotra cryptoCertum izahay izay misy ireo singa ilaina amin'ny serasera miaraka amin'ny rafitra CEPiK. Miankina amin'ny safidy voafantina, ny andiany dia ahitana: karatra sy mpamaky. Noho ny fanamarinana sy ny fanamafisana lavitra dia tsy mila mandefa karatra ara-batana amin'ny minisitera intsony ireo mpampiasa.
Ny Lalànan'ny 24 Jolay 2015 manitatra ny Lalànan'ny Lalànan'ny Fifamoivoizana dia mampiditra fiovana lehibe amin'ny firaketana fiara fitaterana foibe (CEP) sy ireo firaketana mpamily (CEK) ary mamorona rakitsoratra mitazona karatra (CEPKP). Ny datin'ny fampidirana an-kery ny fitsipika vaovao napetraka ho an'ny 4 jona 2018, raha toa ka ao amin'ny fehin-kevitra momba ny Rejistra Vehivavy Sentral (CEP), dia hisy ny fiovana amin'ny 13 Novambra 2017.
Azo atao ny manasonia ny takelaka aorian'ny famenoana azy marina sy ny fisafidianana ny safidinao Generate document. Avy eo dia hafindra any amin'ny My Documents-> for shipping-> vakizoro , amin'ny fahitana mombamomba ny antontan-taratasy. Ny fisoratana anarana dia ilaina ny fanatanterahana ny fandefasana ny fandefasana.
Azontsika atao koa ny manasonia ny antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny fandefasana any amin'ny My documents-> ho an'ny fandefasana ary ao amin'ny fizarana Actions amin'ny fisafidianana Sign ary tsindrio OK.
Ny fisafidianana ny Sign in ao amin'ny Operations mety tanterahana dia hiseho eo amin'ny antontan-taratasy ny varavarankely Misafidy sonia ary hisafidy azy io:
• sonia mendrika
Lafatra amin'ny fombafomba elektronika sy sehatry ny serivisy
Vavahadin-tserasera amin'ny Internet mampifandray ny olom-pirenena amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny alàlan'ny fanomezana vavahadin-tserasera amin'ny Internet, isaorana ny olom-pirenena hanana fahazoana vaovao sy e-serivisy amin'ny toerana iray, ary hahafahany mamaha ny raharaha avy amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Te hanao raharaha ofisialy amin'ny Internet ve ianao? Azonao atao ny manao mari-pahaizana mahafeno
• Manangana mombamomba azo itokisana
Olana ofisialy ho an'ny olom-pirenena, mpandraharaha ary manampahefana →
• Hahazo kopia mari-panambadiana ianao (teraka, fanambadiana, fahafatesana)
• Hanao sonia JPK_VAT ianao
• Ampiasao ny rafitra Elektronika Elektronika sy Fividianan-trosa (EKW)
• Manendry mpisolovava ianao hanao sonia ny fanambarana momba ny hetra elektronika
• Hanafoana na manova ny herin'ny mpisolovava hanao sonia fanambarana momba ny hetra elektronika
• Hahazo kopia ny taratasy fanamarinana momba ny fanambadiana ianao, izay manamarina ny hetsika voasoratra ao amin'ny biraon'ny fisoratana anarana - izany hoe teraka ny zaza, fanambadiana na fahafatesana.
• Hahazo fanamarinana momba ny lise na diplaoma ianao
• Azonao atao ny mametraka sangan'asan'ny sary mihetsika (Iza no manolotra - mpiantoka, Rahoviana? - alohan'ny hanombohany)
• Hahazo fitaovana geodetikitra sy sariitatra ianao
• Azonao atao ny mametraka tompom-bidy tokana
• Fahazoana ny mombamomba ny sehatry ny daholobe (ISP)
• Ho azonao ny karatra fiantohana ara-pahasalamana eoropeanina (EHIC)
• sns ...
Karazan-javatra inona no ataonao amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana mahafeno ny fepetra?
Atao an-tserasera ny raharaha ofisialy
Napetraka ny taratasy fanamarinana mendrika
Fomba fanaterana tahirin-kevitra amin'ny GUGiK:
Manome antontan-taratasy nosoniavina sonia elektronika azo antoka izay nohamarinina tamin'ny alalàn'ny e-mail tamina mailaka mailaka tamin'ny adiresy gugik@gugik.gov.pl. Mandritra izany fotoana izany, te hampahafantatra anao izahay fa ny fandefasana antontan-taratasy amin'izany dia tsy manome antoka ny fahazoana ofisialy. Ny fanamarinana toy izany dia mety ho azo amin'ny alàlan'ny fanolorana ny antontan-taratasy amin'ny fomba voafaritra ao amin'ny teboka 1.
Fangatahana ireo rakitra elektronika nomena ny GUGiK
Ireo antontan-taratasy elektronika dia tsy maintsy hatao sonia miaraka amin'ny sonia nomerika azo antoka amin'ny endrika Xades-Bes
Ireo endrika apetaka azo ekena dia: DOC, RTF, XPS, XLS ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX CSV TXT GIF, TIFF, BMP, JPG, PNG PDF ZIP
Ny haben'ny apetaka rehetra mipetaka amin'ny endrika iray (tahirin-tsary elektronika) dia mety tsy mihoatra ny 10MB, ny haben'ny fametahana tokana dia mety tsy hihoatra ny 3,5MB. Ireo antontan-taratasy na haino aman-jery misy malware dia nolavina ary tsy hoheverina.
Manome fidirana amin'ny loharanom-pahalalana geodetikitra sy cartographic
Haavo fanamarinana mendrika
• ny akora simika; fitaovana mampihomehy; harena voajanahary; loharanom-baomiera; foibe ivotoerana; fanjakana geodetic na tahiry cartografika;
Fanolorana ny antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny famenoana ny endrika "Adin-kery, fampiharana, fanadihadihana amin'ny biraon'ny birao" na apetaka ny antontan-taratasy elektronika nosoniavina toy ny fametahana.
Biraon'ny Geodesy sy sary mihetsika
Azonao atao ny mamerina amin'ny fomba elektronika io raharaha io
Mampihatra an-tserasera tsy avelanao amin'ny tranonao Ny mety indrindra ho anao dia ny manomana sy sonia ny fampiharana an-tserasera. Mandefasa fangatahana hanavao ny angon-droa tafiditra ao amin'ny CEIDG. Ny fampiatoana sy ny famerenana indray ny hetsika fandraharahana dia manova ny fidirana.Ao manao izany, misoratra anarana ao amin'ny tranokalan'ny CEIDG, fenoy ny taratasy ary sonia elektronika amin'ny taratasy fanamarinana mahafeno.
Ny fisoratana anarana foibe sy fampahalalana momba ny hetsika ara-toekarena